खप्तड त्रिवेणीको दर्शन गरि आज असार १३ गते । शनिबारको राशिफल पढ्नुहोस् ! शुभ हुनेछ ! ॐ नम शिवाय |
खप्तड त्रिवेणीको दर्शन गरि आज असार १३ गते । शनिबारको राशिफल पढ्नुहोस् ! शुभ हुनेछ ! ॐ नम शिवाय
२०७७, १३ असार शनिबार ०९:१६ June 27, 2020 ताजा खबरविविध
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) विचारमा आउने परिवर्तनले राम्रा काम गर्न सकिनेछ । तपाईँको बोलिको सबैले कदर गर्नेछन् । आफन्त तथा कुटुम्बसँग बसेर स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । आफ्नो सञ्चित सम्पतिको प्रयोग गरि कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिनेछ । गीत संगीतमा लाग्नेहरुका लागि समयले साथ दिनेछ । साझपख आफन्तसँग मनमुटाब हुनेछ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) समयमा काम नबन्नाले दुख पाइनेछ भने आर्थिक संकटको सामना झेल्नु पर्नेछ । दिदी बहिनीसँग मनमुटाब बढ्ने तथा टाढिने समय रहेकोछ । सवारि साधन प्रयोग गर्दा वा भौतिक सम्पतिको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला समय मध्ययम रहेकोछ । माया प्रेममा अविश्वास बढ्ने योग रहेकोछ । साझको समय राम्रो रहेकोले अध्ययनमा सुधार हुनेछ ।